NoIndex your nri gị na FeedBurner | Martech Zone
N'oge na-adịbeghị anya, ana m arụ ọrụ na saịtị m ụfọdụ iji melite ọ bụ ntinye Inyocha Search. Mgbanwe ndị a emeela mgbanwe ụfọdụ na ntinye m Search Engine. Aga m anọgide na-eso gị na-arụpụta nsonaazụ ka m na-aga n'ihu. Otu n’ime mgbanwe ndị m mere n’oge na-adịbeghị anya bụ ibugharị okporo ụzọ ọ bụla site na http://dknewmedia.com na http://martech.zone. Achọrọ m ka www bụrụ ngalaba m bụ isi ebe a na-amata isiokwu m. Amaghị m ụdị mmetụta nke a ga - enwe - anyị ga - ahụ.
M na-agụ otu isiokwu taa na Onye njem ala ire ahịa na ijiri ndepụta gị. Mara mma na-akpali, M na-aghọtaghị na i nwere ike n'ezie ina ntaramahụhụ site search engines maka oyiri ọdịnaya naanị n'ihi na gị RSS ndepụta dị n'ebe ahụ! Ihe ederede na-ekwu na ịnye mkpado noindex meta na ndepụta gị ga-egbochi engines ọchụchọ site na ịkọwapụta ibe ndepụta gị.
Enwetara m ọnọdụ na Feedpress nke ahụ na-enye ohere nke a. Nke a bụ nseta ihuenyo. Emebiri nhọrọ ahụ ka ị gbanye NoIndex ma chekwaa ntọala gị.
Feedburner bụ ọrụ pụtara ìhè. Ka m na-eji ya eme ihe, otú ahụ ka ọ na-atọkwu m ụtọ. You'll ga-ahụ ọtụtụ ederede na saịtị m gbasara ọrụ ha ma jikọta ya na saịtị gị. Ntinye usoro ntinye dị na E-metricging ịde blọgụ ndu m dere.
Daalụ maka n'ọnụ. Ahụghị m nhọrọ ahụ n'okpuru ebe ahụ.
Bet nzọ, Tracy. Amaghị m ya ruo taa! Ekwuru m n'oge gara aga na Feedburner bụ ngwa ọrụ dị egwu, ọ na-esiri ike ịgagharị.
Nnukwu ego Douglas!
Achọpụtara m na nhọrọ mgbe mbụ m configuring m Feedburner faili ntanetịime, ma m kwubiri “n'aka… gịnị agaghị ekwe ka search engines ndenye ndepụta m, ọ ga - enyere aka, aka nri!”
O doro anya na m hiere ụzọ. 🙂
Daalụ maka ego Douglas! Ozugbo emejuputa 🙂
Ọzọ na-ekele gị maka n'ọnụ, Douglas. Etinyere m ya ozugbo. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ na ha nwere igbe nlele iji mejuputa akara nofollow, mana emeghị ka ọ rụọ ọrụ.
Daalụ maka n'ọnụ. Enwere m ya ahọrọ, mana amatabeghị ihe kpatara ya (ọ dịghị ele anya n'ezie).
Hmmm, atụmatụ ahụ abanyelarị na ndepụta m. Ọ ga - ekwe omume na ha nyere ya aka na ndabara?
Ọ dị oke mma. Daalụ!
Na mgbakwunye na nke a iji robots.txt na ewepu ndepụta gị na ya!
Nke ahụ bụ nnukwu echiche. Kedu ụzọ kachasị mfe iji mee nke ahụ?
Na-ahazi nke ọma na nyocha Technorati. Nke ahụ bụ otu m si chọta blog gị - ugboro abụọ - na mberede oge ọ bụla.
Echere m ma ọ bụrụ na ihe m na-achọ wetara m gị ugboro abụọ n'izu, nke ahụ kwesịrị ka ibe edokọbara 🙂
Nke ahụ dị mma ịnụ, Thor. Enwere m olileanya na m ga-emezu ihe ndị ị tụrụ anya ha! Aga m na-enyocha blọọgụ gị! M na-agbalị ime nke ahụ na onye ọ bụla mara mma iji biputere okwu.
Feedburner bụkwa saịtị PR 8 yabụ njikọ ndị ahụ bụ ihe ọ juiceụ juiceụ mara mma. Agbanyeghị, ejighi m n'aka etu ntinye egwu si abanye.
Jenụwarị 20, 2010 na 3:32 PM
nnukwu ego, daalụ!
bài nà hay hay, cảm ơnạ